-Dhacdo Shiinaha FK838 Mashiinka calaamadaynta khadka wax soo saarka ee tooska ah ee warshadda Gantry Stand iyo alaab-qeybiyeyaal |Fineco
FK838 Mashiinka Calaamadaynta Khadka Soo saarista Qaab-dhismeedka Tooska ah ee Xariirka
La habeeyey oo lagu rakibay khadka isku-xidhka, ku calaamadinta diyaaradda sare iyo dusha sare ee walxaha qulqulaya.
Mashiinka calaamadaynta tooska ah ee FK838 wuxuu leeyahay hawlo dheeraad ah si loo kordhiyo fursadaha:
1. Mashiinka codaynta ribbon ee ikhtiyaarka ah ayaa lagu dari karaa madaxa calaamadda, dufcada wax soo saarka, taariikhda wax soo saarka iyo taariikhda dhicitaanka ayaa la daabici karaa isku mar.Yaree habka baakadaha, si weyn u wanaaji waxtarka wax soo saarka, dareenka calaamadda gaarka ah.
Mashiinka calaamadaynta tooska ah ee FK838 wuxuu ku habboon yahay badeecadaha u baahan wax soo saar ballaaran, oo leh calaamad sare oo sax ah ± 0.1mm, xawaare degdeg ah iyo tayo wanaagsan, wayna adagtahay in qaladka lagu arko indhaha qaawan.
Mashiinka calaamadaynta tooska ah ee FK838 wuxuu daboolayaa bed dhan 1.11 mitir kuyuub ah
Awoodda (kumbuyuutar / daqiqo) 40 ~ 150;adeeg: 50 ~ 200
L: 10 ～ 250; W: 10 ～ 120.
Cabbirka mashiinka (L*W*H)(mm) Samee hadba baahida
Cabbirka Xidhmada (L*W*H) (mm) Samee hadba baahida
Mashiinka calaamadaynta tooska ah ee FK838 wuxuu daboolayaa bed dhan 1.11 mitir kuyuub ah.
Hore: FK813 Automatic Double Head Plane Labeling Machine
Xiga: FK308 Buuxa oo Toomaatig ah Nooca L nooca L ah oo xidhidh iyo xidhidh
Mashiinka calaamadaynta oo lagu dhejin karo khadka wax soo saarka
Mashiinka calaamadeynta ee Gantry Stand
mashiinka calaamadaynta oo lagu dhejin karo khadka shirarka
mashiinka calaamadaynta diyaaradda
mashiinka calaamadaynta jir portal